अर्थमन्त्री पाउने भएपछि दाङको भालुवाङ प्रदेश राजधानी मान्न विष्णु पौडेल तयार - Media Dabali
अर्थमन्त्री पाउने भएपछि दाङको भालुवाङ प्रदेश राजधानी मान्न विष्णु पौडेल तयार
काठमाडौं - गत निर्वाचनमा रुपन्देहीको बुटवललाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै चुनाव जितेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अहिले आफ्नो घोषणाबाट पछि हटेका छन् ।
प्रदेश ५ सरकारले दाङको भालुवाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि अहिले सो निर्णयविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ भने नेकपाकै सांसदहरू असन्तुष्ट भएका छन् ।
एकाएक बुटवलबाट किन राजधानी हटाइयो भन्ने विषयमा चासो देखिएको छ । नेकपाकै महासचिव पौडेलको सहमतिविना कसरी यस्तो निर्णय भयो भन्ने रहस्य खोजी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार पौडेलले अर्थमन्त्रीसँग प्रदेश राजधानी साटेको विषयले नेकपामा खैलाबैला भएको छ । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलेदेखि नै दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउन चाहन्थे ।
तर, त्यसका लागि बाधक थिए विष्णु पौडेल । अर्थमन्त्रीमा पौडेललाई पठाएर दाङको भालुवाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड दुवैको सहमति मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लिएको नेकपा उच्च स्रोतले बतायो ।
सोही कारण केही दिनभित्रै पौडेलले अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति पाउँदैछन् । आफ्नै मतदाताले तीव्र विरोध जनाएपछि पौडेलले औपचारिकता निभाउनकै लागि बुटवल नै प्रदेश राजधानी हुनुपर्छ भनेर मसिनो स्वर निकालेको बुझिएको छ ।
तर, कांग्रेसले सशक्त आन्दोलन जारी राखेकाले ओली र प्रचण्ड तनावमा परेका छन् । उनीहरू अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाउन लागिपरेका छन् ।
बिष्णु पौडेलको अंगरक्षकलाई कोरोना संक्रमण
अख्तियार प्रमुख नियुक्ति दिलाउन हाइड्रो माफिया र भूमि माफियाको आ–आफ्नै दाउ, कसको रोजाइ को ?
दशैंको मुखमा मन्त्रि बन्नेहरुको नामावली सार्बजनिक, बिष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई यो मन्त्रालय जिम्मा दिईदै !
बालुवाटारको आठ आना जग्गा फिर्ता गर्दा विष्णु पौडेललाई १६ आना फाइदा
नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको पहिलो झड्का २० करोड डलरको
बिहिवार, आश्विन २९ २०७७०३:२६:२४